Dhageyso Shisheeyaha Somali Kusoo Duulay Oo Mushaar La’aan Ka Cabanaya. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Shisheeyaha Somali Kusoo Duulay Oo Mushaar La’aan Ka Cabanaya.
April 30, 2016 5:06 pm Views: 20
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa iska soo daba dhaceysa qeyla-dhaan ka imaaneysa qaar ka mid ah dowladaha ku bahoobay isbaheysiga Kufaarta Afrikaanta ee dagaalka kaga jira Soomaaliya kuwaas oo ka sheeganaya Mushaar laâ€™aan soo wajahday ciidamadooda, iyagoona masâ€™uuliyadda arintaas dusha kaga tuuray ururada midowga Africa iyo midka midowga gaalada Yurub.
Dowladda Uganda oo ka mid ah dowladaha ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ku dhawaad 7 bilood ah aysan ciidamadooda helin wax mushaaraat ah, islamarkaana taasi ay niyad jab xoogan u keentay ciidankooda, sidoo kalena ay dib u dhigtay howlgaladii ciidankooda ay ka wadeen gudaha Soomaaliya.
Dowladda Itoobiya ayaa iyadana ka cabaneysa isla mushkilad arintaan la mid ah sida dhawaan uu ka dhawaajiyey waziirka arimaha dibadda ee dowladaha Itoobiya. Ilaa hadda lama garan karo sababta rasmiga ah ee lala xiriirinayo arintaan balse Dowladda Uganda oo ciidamada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay arintaan kala hadleyso midowga Africa, islamarkaana ay ka fiirsan doonto sii joogitaanka ciidankooda ee Soomaaliya iyo faaâ€™idada ka soo galeysa.
Pady Akunda oo ah Afayeenka Ciidamada Kufaarta Uganda ee UPDF-ta loo yaqaano ayaa maalin ka hor wakaalada wararka ee Xinhua u sheegay in wax ka badan 6,000 oo askari oo ciidamadooda ka tirsan aysan helin mushaaraatkooda muddo bilooyin ah balse arintaan ay hadda kala hadlayaan Saraakiisha ururka midowga Africa.
Akunda oo Telephone-ka ugu waramay Wakaaladan ayaa rajo ka muujiyey wadahadalo imika u socda iyaga iyo midowga Africa balse wuxuu tilmaamay in mushkiladda ay ka timid dhanka midowga Yurub kuwaas oo dhawaan jaray 20% mushaaraatkii ciidanka, sidoo kalena in muddo ah hakad geliyey lacagihii ku bixi jiray ciidanka.
Gudiga difaaca iyo arimaha gudaha ee dowlada Uganda ayaa dhawaan xukuumada ka dalbaday ay soo gudbiso warbixin dhameystiran oo ku saabsan howlgalka ciidamadooda ee Soomaaliya iyo qarashka ku baxa, Iyagoo sidoo kale ku baaqay in jawaab deg deg ah laga bixiyo ciidamada aan mudada 7 bilood helin Mushaaraatka ee ku sugan Soomaaliya.
Gudigan ayaa sheegay in xukuumada looga fadhiyo in ay baarlamaanka horkeento warbixin dhameystiran, iyagoona tilmaamay in ay muhiim tahay in la ogaado ujeedka ciidankooda ay u joogaan Soomaaliya iyo faaâ€™idada ugu jirto.
Dowlada Uganda ayaa dhawaan 1,800 oo askari oo ka daadgureysay Soomaaliya kuwaas oo la geeyey wadanka Uganda laakiin lama oga in ciidamadaas ay ahaayeen kuwo badal ah ama in looga jawaabayey talaabada midowga Yurub ee lagu joojiyey mushaaraatkii ciidanka.
Askar waliba oo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta oo ku sugan Soomaaliya wuxuu mushaar ahaan u qaadan jiray 1028 dollar, Waxaana 200 oo dollar ka reeban jirtay dowladiisa, wuxuuna si gaar ah u qaadan jiray ilaa 828 dollar.
Balse dhawaan markii midowga yurub ay jareen 20%, wuxuu Mushaarka Askarta noqday 828 dollar, Waxaana marka laga jaro labadii 200 ee dowladu reeban jirtay uu micnaheedu yahay in askari waliba helayo ilaa 628 dollar laakiin dhibaatada meesha ka taagan ayaa ah in markan la waayey lacagtii oo dhan.
Halkan Ka Dhageyso Warbixin Ka Hadleysa Cabashada Kufaarta AMISOM.